Daniel hụrụ ebule na mkpi n’ọhụụ (1-14)
Obere mpi buliri onwe ya elu (9-12)
Ọ ga-adịru ụbọchị 2,300, mgbede na ụtụtụ (14)
Gebriel kọwara ọhụụ ahụ (15-27)
Ihe ebule na mkpi ahụ pụtara (20, 21)
Eze ihu ya na-emenye ụjọ chịwara (23-25)
8 N’afọ nke atọ n’ọchịchị Eze Belshaza,+ mụnwa bụ́ Daniel hụrụ ọhụụ ọzọ mgbe m hụchara ọhụụ ahụ m hụburu.+ 2 M nọ na Shushan*+ bụ́ ebe obí eze dị,* n’ógbè* Ịlam,+ mgbe m nọ na-ahụ ihe na-eme n’ọhụụ ahụ. Mgbe m nọ na-ahụ ọhụụ ahụ, m nọ n’akụkụ ọwa mmiri dị na Yulaị. 3 Mgbe m leliri anya, m hụrụ otu ebule+ nke guzo n’ihu ọwa mmiri ahụ. O nwere mpi abụọ.+ Mpi ya abụọ ahụ toro ogologo, ma otu ka ibe ya ogologo. Ọ bụ nke ahụ ka ogologo pulitere n’ikpeazụ.+ 4 Ahụrụ m ka ebule ahụ sọọrọ mpi gaa n’ebe ọdịda anyanwụ nakwa n’ebe ugwu nakwa n’ebe ndịda. E nweghị anụ ọhịa ọ bụla nwere ike iguzo n’ihu ya, e nweghịkwa onye nwere ike ịnapụta ihe ọ bụla n’aka ya.+ Ọ na-eme ihe ọ bụla dị ya mma, na-ebulikwa onwe ya elu. 5 Ka m nọ na-ele ihe na-emenụ, m hụrụ otu mkpi+ nke si n’ebe ọdịda anyanwụ na-agazu ụwa niile, ma ụkwụ ya anaghị emetụ n’ala. Mkpi ahụ nwere otu mpi a na-ahụ nke ọma nke dị n’agbata anya ya abụọ.+ 6 Ọ nọ na-abịakwute ebule ahụ nwere mpi abụọ nke m hụburu ka o guzo n’ihu ọwa mmiri. Mkpi ahụ ji iwe na ọnụma gbara ọsọ na-agakwuru ebule ahụ. 7 M hụrụ ka ọ na-abịaru ebule ahụ nso, ọ na-ewesakwa ya oké iwe. Ọ sọrọ ebule ahụ mpi, sọtuo ya n’ala ma gbajie mpi ya abụọ. Ebule ahụ enweghị ike iguzo n’ihu ya. Ọ kwaturu ebule ahụ n’ala ma zọọ ya ụkwụ, e nweghịkwa onye napụtara ebule ahụ n’aka ya. 8 Mkpi ahụ buliri onwe ya elu gafee ókè. Ma ozugbo o siri ike, a gbajiri nnukwu mpi ya. Mpi anọ a na-ahụ nke ọma puliteziri nọchie mpi ahụ. Mpi anọ ahụ chere ihu n’akụkụ anọ nke eluigwe.*+ 9 Otu obere mpi si n’otu n’ime mpi anọ ahụ pulite. Obere mpi a wee sie ezigbo ike. O chere ihu n’ebe ndịda nakwa n’ebe ọwụwa anyanwụ nakwa n’Ala Mara Mma.*+ 10 Ọ nọ na-esikwu ike nke na o ruru n’ebe ihe ndị dị n’eluigwe dị.* O mekwara ka ụfọdụ n’ime ihe ndị dị n’eluigwe na ụfọdụ kpakpando daa n’ụwa, o wee zọọ ha ụkwụ. 11 O bulidịrị onwe ya elu wee maa Onyeisi nke ihe ndị dị n’eluigwe* aka. E wepụkwara àjà a na-achụrụ Onyeisi ahụ mgbe niile ma kwatuo ebe nsọ ya nke a rụsiri ike.+ 12 E nyefekwara ya ụfọdụ ihe ndị dị n’eluigwe* nakwa àjà a na-achụ mgbe niile. Ọ bụ n’ihi mmehie ya. Ọ nọkwa na-akwatu eziokwu n’ala. Ihe ọ nọ na-eme na-agara ya nke ọma. 13 M wee nụ ka otu onye nsọ na-ekwu okwu. Onye nsọ ọzọ jụrụ onye nke ahụ na-ekwu okwu, sị: “Olee mgbe ihe ahụ a hụrụ n’ọhụụ ga-adịru, ya bụ, ihe a hụrụ gbasara àjà a na-achụ mgbe niile nakwa gbasara mmehie nke na-eweta mbibi+ nakwa gbasara ụkwụ a ga-azọ ebe nsọ ahụ na ihe ndị dị n’eluigwe?”* 14 O wee sị m: “Ọ ga-adịru puku ụbọchị abụọ na narị atọ (2,300), mgbede na ụtụtụ. A ga-emezi ka ebe nsọ ahụ dịghachi otú o kwesịrị ịdị.” 15 Mgbe mụnwa, bụ́ Daniel, nọ na-ahụ ihe na-eme n’ọhụụ ahụ ma na-agbalị ka m ghọta ya, na mberede, m hụrụ onye yiri mmadụ ka o guzo m n’ihu. 16 M wee nụ olu mmadụ n’etiti ọwa mmiri Yulaị.+ Onye ahụ ji oké olu kwuo, sị: “Gebriel,+ mee ka onye a ghọta ihe ọ hụrụ.”+ 17 N’ihi ya, ọ bịara nso n’ebe m guzo. Ma mgbe ọ bịara, ezigbo ụjọ jidere m nke na m gburu ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala. Ọ sịziri m: “Nwa nke mmadụ, ghọta na ọhụụ ahụ bụ maka oge ikpeazụ.”+ 18 Ma mgbe ọ nọ na-agwa m okwu, ezigbo ụra buuru m ka m kpudoro ihu n’ala. N’ihi ya, o metụrụ m aka wee mee ka m guzoro ọtọ n’ebe ahụ m guzobu.+ 19 O kwuziri, sị: “M na-eme ka ị mara ihe ga-eme ná ngwụcha oge iwe Chineke, n’ihi na ihe a ga-eme n’oge a kara aka, ya bụ, n’oge ikpeazụ.+ 20 “Ebule ahụ ị hụrụ nke nwere mpi abụọ nọchiri anya ndị eze Midia na Peshia.+ 21 Mkpi ahụ gbajuru ajị n’ahụ́ nọchiri anya eze Gris.+ Nnukwu mpi ahụ nke dị n’agbata anya ya abụọ nọchiri anya eze nke mbụ.+ 22 Ebe ọ bụ na a gbajiri mpi ahụ, mpi anọ epuo nọchie ya,+ a ga-enwe alaeze anọ ga-esi ná mba ya chịa,* ma ha agaghị esi ike ka ya. 23 “Ná ngwụcha ọchịchị ha, mgbe ndị na-emebi iwu mezuru mmehie ha, otu eze nke ihu ya na-emenye ụjọ, nke na-aghọtakwa okwu na-edoghị anya,* ga-amalite ịchị.* 24 Ọ ga-esi ezigbo ike, ma ọ gaghị abụ n’ike aka ya. Ọ ga-ala ọtụtụ ihe n’iyi. Ihe ọ na-eme ga na-agara ya nke ọma, ọ ga-emezukwa ihe dị ya n’obi. Ọ ga-ebibi ndị dike, bibiekwa ndị nsọ.+ 25 Ihe ga na-agaziri ya maka na o ji akọ na-aghọgbu ọtụtụ ndị. Ọ ga-ebuli onwe ya elu n’obi ya. Ọ ga-alakwa ọtụtụ ndị n’iyi n’oge obi ruru onye ọ bụla ala.* Ọ ga-amakwa Onyeisi ndị isi niile aka, ma ọ bụghị aka mmadụ ka a ga-eji bibie ya. 26 “Ihe e kwuru n’ọhụụ a ị hụrụ gbasara mgbede na ụtụtụ bụ eziokwu. Ma akọsala ihe ị hụrụ n’ọhụụ a* n’ihi na ọ bụ mgbe dị anya n’ọdịnihu* ka ọ ga-emezu.”+ 27 Ma ike gwụrụ mụnwa, bụ́ Daniel, m rịakwara ọrịa ọtụtụ ụbọchị.+ Mgbe e mechara, m biliri rụwa ọrụ m na-arụrụ eze.+ Ma ahụ́ afọghị m n’ihi ọhụụ ahụ m hụrụ, e nweghịkwa onye nwere ike ịghọta ya.+
^ Ma ọ bụ “Susa.”
^ Ma ọ bụ “ebe a rụsiri ike.”
^ Ma ọ bụ “ná mpaghara.”
^ Na Hibru, “n’ifufe anọ nke eluigwe.”
^ Ma ọ bụ “n’Ihe E Ji Achọ Mma.”
^ Na Hibru, “ìgwè ndị agha nke eluigwe nọ.”
^ Na Hibru, “ìgwè ndị agha.”
^ Na Hibru, “bilie.”
^ Ma ọ bụ “nke makwa otú e si aghọ aghụghọ.”
^ Na Hibru, “ga-ebili.”
^ O nwere ike ịbụ, “mgbe ha na-atụghị anya ya.”
^ Na Hibru, “kpuchie ọhụụ a.”
^ Na Hibru, “n’ọtụtụ ụbọchị dị n’ihu.”